FIFIDIANANA BEN’NY TANANA : Tsy hita tabilao tany amin’ny renivohi-paritany ny Tim
Vita soa aman-tsara iny ny latsa-bato ho an’ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolo-tsaina Kaominaly. 29 novembre 2019
Efa hita taratra avokoa ny fironana rehetra indrindra manerana ny renivohi-paritany enina eto Madagasikara na dia mbola vokatra vonjy maika ihany aza. Tapitra hatreo ny lalan’ny antoko Tiako i Madagasikara. Nibaby faharesana ny filohan’ny antoko, Ravalomanana Marc tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena, zara raha nahita Depiote 16 isa izy tamin’ny fifidianana Solombavambahoaka farany teo. Nihevitra ny hanarina ny lesoka rehetra sy hampamiratra ny antokony hatrany ingahy Ravalomanana tamin’ity fifidianana ben’ny tanàna ity saingy nijanona ho nofy ratsy fotsiny izany. Nofy ratsy satria ireo Kaominina tena nanjakan’ny antoko Tim teo aloha dia efa babon’ny antoko volomboasary avokoa.
Anisan’izany, ohatra, ny tao Antsirabe sy ny teto Antananarivo Renivohitra. Ireto farany dia tsy laitra akisoka raha vao antoko Tiako i Madagasikara sy ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Ankehitriny anefa resy ny kandida avy amin’ny antoko Tim tao Antsirabe, ary resy ihany koa teto Antananarivo Renivohitra. Tsy vitan’izany fa mbola tsy hita tabilao mihitsy ihany koa ity antokon’ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc ity manerana ny renivohi-paritany miisa enina. Tsy misy na dia iray aza kandidan’ny Tim lany tamin’ireo Faritra ireo. Lefy hery tanteraka ny Tim ankehitriny, tsy mahagaga izany fa na ny mpikambana efa tranainy aza efa niala tsy ho mpikamban’ny antoko intsony.
Hita misongadina sy mamiratra hatrany kosa ny Kandidan’ny Irk miara-dia amin’ny Filoha Andry Rajoelina. Mazava ny lalan’ny fandresena ho an’ny Kandida Naina Andriantsitohaina ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra. Raha ho an’ny Faritra Avaratry ny nosy iny kosa dia Kaominina ambonivohitra miisa dimy ao anatin’ny Faritra Sava sy Diana no nahalany ny Kandidan’ny Irk. Anisan’izany ny tao amin’ny Kaominina Andapa, Antalaha ary Vohemara, samy ao anatin’ny Faritra Sava ary Nosy Be sy Ambilobe ho an’ny Faritra Diana. Ankoatra ireo dia ny kandida avy amin’ny tsy miankina no nahazo toerana.
2019-11-29 14:16:55 par R.A.N.T.
tsy dia hiresaka ny vokam-pifidianana no hanoratako, fa ilay fomba filaza momba ny antoko Tiako i Madagasikara.
tsy mahagaga hoy ny lahatsoratra raha milala ny mpikambana tranainy, satria lefy hery ny TIM...
raha tena mpanao politika mitazona ny politika anefa dia tokony manabe voa sy mampivelatra hatrany ny antoko no tokony atao...
fa tsy hiova loko isaky ny misy fididianana na mamadika palitao araka ny fomba fiteny......
ny tokony ataon’ny antoko dia ho fampandrosoana ny olom-pirenena sy ny Tanindrazana iombonana.
Mirary soa an’i Madagasikara